Jaamcadda Nugaal iyo Geeddi Socodka Xoojinta Xidhiidhka Dibadda (Warbixin) | Kalshaale
Jaamcadda Nugaal iyo Geeddi Socodka Xoojinta Xidhiidhka Dibadda (Warbixin)
Jan 30, 2018 - Aragtiyood
Jaamacadda Nugaal oo ku taala magaalada Laascaanood ee gobolka Sool faracyana ku leh qaybo ka mid ah dalka lana aas aasay sanadkii 2004-tii ayaa waxay ku tallaabsatay horumar dhinacyo kala duwan leh oo dhanka Waxbarashada wax soo saarka iyo Sidoo kale tayaynta aqoonta .
Jaamacada oo ay hada ay wax ka bartaan in ka badan 1,000 arday oo dhigta 11 kuliyadood oo ay Jaamacaddu ka kooban tahay .
Jaamacada oo sanad waliba ay ka qalin jabiyaan arday ka badan boqolaal arday ayaa waxaa ay bah wadaag
dhanka wada shaqaynta iyo Waxbarashada ah la leedahay Jaamacado kala duwan oo ku yaalla gudaha dalka ,
Wadamada Qaarada Africa iyo Jaamacado kale oo ku yaalla Qaaradaha Europe , Asia America iyo Australia.
Todobaadyadii ugu danbeeyey waxaa ay hogaanka Jaamacadda Nugaal Safar shaqo ku joogeen dalka sudan, Safarkan oo uu hogaaminayey gudoomiyaha Jaamacadda Nugaal Pro. C/Rrisaaq Maxamed Aadam (Lafoole) iyo hormuudka kulliyadda shareecada & dirasaadka islaamka Sh. Dr. Axmed Jaamac IsmaaciilMmire ayaa ujeedka socdaalkiisa lagu soo ururin karaa:
1- In la abuuro wada shaqayn iyo is aqoonsi dhexmara Jaamacadda Nugaal & Wasaaradda Waxbarashada tacliinta sare & Cilmi barista ee Dalka Sudan.
2- Is fahan, xidhiidh, iyo wada shaqayn dhexmarta Jaamacadda Nugaal iyo Jaamacadaha mugga leh ee dalka Sudan.
3- Xidhiidh lala sameeyo Hay’adaha Khayriga ah ee taageera tacliinta sare.
4- Khibrad iswaydaarsi iyo aqoon kororsi lala yeesho aqoonyahanada iyo khubarada tacliinta sare ee dalka Sudan.
5- Xogwaran iyo iswaraysi lala yeesho aqoonyahanka & ardayda Soomaliyeed ee ku sugan dalka Sudan.
Mudadii ay ku sugnaayeen Wadanka Suudaan Waxaa u qabsoomey wafdigani :
1- in Xogta (documents) -kii Jaamacadda loo gudbiyay wasaaradda waxbarashada tacliinta sare & cilmi barista ee dalka Sudan, oo lagala kulmay qabilaad fiican, loona balansanyahay kulan qabsoomi doona maalmaha soo aadan.
2- Jaamacadda Nugaal iyo jaamacadaha suudaan oo kala saxeexday heshiisyo is fahan & wada shaqayn ah, Jaamacadahaas ayaa wax aka mid ah:
1- International university of Africa
2- Neelain University
4- Red Sea University
Afartan jaamacadood ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu waawayn dalka suudaan, sidoo kale wafdiga wuxaa u hadhsan jaamacado dhawr ah oo hadii eebe ogolaado uu kulamo la qaadan doono maalmahaha soo socda.
3- Masuuliyiinta Jaamacadda ee ku sugan dalka Sudan ayaa kulan xog waraysi ah la qaatay aradayda Soomaliyeed ee wax ka barata dalka sudan, kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen dallada ardayda somaliyeed ee wax ka barta wadanka sudan, ayaa ka dhacay hoolka Jaamacadda International University of Africa.
4- Sidoo kale Wafdigan ayaa kulammo la qaatay Masuuliyiinta Hay’adda deeqaha iyo daryeelka ardayda dibada ka timaada ee wax ka barta Wadanka Suudan.
Masuliyiinta Jaamacadda oo weli ku sugan wadanka suudan ayaanu isku dayaynaa in aanu si dhow idiinla socodsiino wixii waxqabad ah ee ka soo kordha safarkooda shaqo.
Qalinka Mawliid Haradigeed Lasanod .